မြေပဲထောပတ် စားပေးပါ - Hello Sayarwon
မြေပဲထောပတ်က မြန်မာလူမျိုးတွေ အကြိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အချိုပွဲ အနေနဲ့တော့ ပေါင်မုန့်နဲ့ သုတ်ပြီးဖြစ်ဖြစ် သကြားမပါတဲ့ cracker လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် တွဲစားလို့ ရပါတယ်။ မြေပဲအရသာနဲ့ ချိုချိုမွှေးမွှေးလေး စားလို့ကောင်းတဲ့ မြေပဲထောပတ်က စိတ်ကျေနပ်စေတဲ့ အရသာကိုတင် ပေးတာ မဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာရေးကိုလည်း အထောက်အပံ့ပေးပါသေးတယ်။
ကြွက်သား နဲ့ အရိုးတွေ သန်မာစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်း
ကျန်းမာစေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်
အရိုးတွေကို သန်မာစေပြီး ဆဲလ်တွေကို အင်အားတွေထုတ်လုပ်အောင် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ phosphorus
အရိုးတွေ သန်မာစေတဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်
ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေတဲ့ ဇင့်
နှလုံး နဲ့ ကိုယ်ခံအား စနစ်ကို ကျန်းမာစေတဲ့ ဗီတာမင် B6
အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေတဲ့ အမျှင်ဓာတ်
သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ ပိုတက်စီယမ်
အရေပြားကို ကျန်းမာစေတဲ့ ဗီတာမင် E စတာတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
မြေပဲထောပတ်ကို ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် စားပေးမယ်ဆိုရင်
မြေပဲထောပတ်မှာ ကိုယ်ခံအားကို အားဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင် B6 နဲ့ ဇင့် တို့ ပါဝင်နေပါတယ်။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့ မြေပဲထောပတ်ကို စားမယ်ဆိုရင် သကြား နဲ့ ဆား ပါဝင်မှု နည်းတာကို ရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်။
မြေပဲထောပတ်မှာ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်း၊ အမျှင်ဓာတ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အဆီ၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဗီတာမင် E တို့လည်း ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။
မြေပဲထောပတ်က အမျှင်ဓာတ် နဲ့ ပရိုတင်း ပါဝင်တာကြောင့် အဆာခံစေပြီး စားလိုက်တဲ့အခါ စိတ်ကျေနပ်မှု ရစေတာကြောင့် ဝိတ်ချချင်သူတွေ စားသုံးပေးလို့ ရပါတယ်။
မြေပဲထောပတ်မှာ ကြွက်သားတွေကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေနိုင်တဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်က ကြွက်သားတွေ အပြင် အရိုးဖြစ်ပေါ်မှု နဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကိုပါ အထောက်အကူပြု ပေးပါသေးတယ်။ အရိုး သန်မာစေဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်လည်း ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ တစ်နေ့ကို မြေပဲထောပတ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းစာနဲ့ တစ်ပတ်ကို ၅ ရက်ထက်မနည်း စားပေးမယ်ဆိုရင် ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပေးနိုင်တယ်၊ လို့ သိရပါတယ်။
သဘာဝစစ်စစ် မြေပဲထောပတ် ဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါမယ်။
မြေပဲထောပတ်မှာ ကျောက်ကပ်က သွေးစစ်ထုတ်တာကို ကူညီပေးပြီး ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကို ကျန်းမာစေတဲ့ ပိုတက်ဆီယမ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ်က သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးသလို သွေးမတိုးစေဖို့ ကာကွယ်ပေးပြီး နှလုံး ကျန်းမာစေဖို့လည်း အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ မြေပဲထောပတ်စားပေးတာက ရင်သားကင်ဆာ အပါအဝင် ရင်သားမှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ အမျိုးမျိုးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်၊ လို့ လေ့လာမှု တစ်ရပ်အရ သိရပါတယ်။
ရင်သားကင်ဆာ မျိုးရိုး ရှိသူတွေ အနေနဲ့ မြေပဲထောပတ် စားပေးမယ်ဆိုရင် ရင်သားကင်ဆာ ခံစားရနိုင်ခြေကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးနိုင်မှာပါ။
Is peanut butter good for you? https://www.medicalnewstoday.com/articles/323781 Accessed Date 28 July 2020
Is Peanut Butter Good or Bad for Your Health? https://www.healthline.com/nutrition/is-peanut-butter-bad-for-you Accessed Date 28 July 2020
Is peanut butter healthy? The top 10 health benefits of peanut butter https://www.healthymummy.com/peanut-butter-healthy-top-10-health-benefits-peanut-butter/ Accessed Date 28 July 2020